Banyere Anyị - Jinhua Comfort Vehicle Co., Ltd
Electric igba skuuta
Electric Mobiliy skuuta
Abụba na Taya E-bike
Ọzọ akụkụ ahụ mapụtara & ngwa
Projects ozi ọma
JINHUA Kasienụ VEHICLE.CO., LTD bụ a Company ị pụrụ ịdabere na na ọ na-Odude ke Jinhua, Zhejiang Province, China, nke sitere ya ihe mgbaru ọsọ na green na ike na-azọpụta iga na-enye ndị mmadụ a ike na ala na-agba ịnyịnya mmetụta. The ụlọ ọrụ na-tumadi na-Nlụpụta na ere iche iche iche iche nke e-anyịnya igwe, agagharị scooters, electric n'oche nkwagharị wdg
Dabere na anyị development & mmepụta ike, ike àgwà akara usoro, ma ọgaranya ahụmahụ ndị na-exporting dị iche iche ahịa. Anyị maara otú na-enye ezi ngwaahịa na ezi ọrụ maka Importers na nkesa n'ụwa nile. OEM / ODM na ụfọdụ customization ọrụ dị. Ma anyị nwere ike nye mkpa ndụmọdụ maka ọhụrụ ahịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
JINHUA Kasienụ VEHICLE.CO., LTD na-mgbe na-achọ ọhụrụ azụmahịa mmekọ n'ebe ọ bụla n'ụwa ị bụ. Na Certifications nke EN15194, OA, Mankeumman, RoHS dị ka ị na-mbubata mfe na Europe ma ọ bụ na ebe ọ bula i nwere.
JINHUA Kasienụ VEHICLE.CO., LTD nabata gị na ukwuu pụrụ iche na-arụ ọrụ, niile na ọgaranya ahụmahụ na ubi nke electric anyịnya igwe na Agagharị scooters.
No.588 huatai ụzọ, jinhua obodo, Zhejiang